Kuratidza zvinyorwa neelebheri drapes
Maitiro ekuita chifukidzo kumba
Iyi tauro yemapepa inoraswa inoitirwa kuti munhu ashandise kwenguva pfupi. Zvinoitwa muminiti. Isu tinokurudzira kuita zvimwe zvacho kuitira kuti ugare uine masks ako aripo zuva rese. Chengetedza madonhwe asina kushandiswa mune sachet isina kuchena.
Zvinhu zvekugara zviripo:
Disposable handkerchief packageAny tambo, tambo kana weaveOffice stapler - dhiri inogona kugadzirwa isina stapler
Isa ruoko paruoko pasi uye peta zviyo kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe.Kumhedzisiro mbiri, tarisa kana kubatanidza ribhoni, tambo, weaver kana chimwe chinhu chakafanana nepamba pako paruoko rwako. Tora mhedzisiro yemahara ejasi (ribhoni, tambo, nezvimwe) kumashure kwemutsipa wako - uye waita!
Maitiro ekubata kwechidzitiro:
Geza maoko ako nesipo nemvura usati wagadzira uye wakapfeka mask. Bvisa chifukidzo nekuregedza nekumashure mbichana kumashure uye kanda chifukidzo ipapo ipapo. Haambobata ...
Koronavirus - Pepa rekudonha nekukurumidza uye nyore